Eminyakeni yamuva, ukukhishwa kwezinwele kuye kwabathinta abantu abancane kakhulu kunangaphambili. Izizathu zalokhu zingabizwa ngokuthi imvelo embi, ukungondleki, ukucindezeleka. Kodwa akuzona zonke izici eziholela ekuzileni. Ingabe unezinwele? Ungakuvimbela kanjani? Lokhu kuzoxoxwa kulesi sihloko.
Ngaphambi kokuba ufunde indlela yokuvimbela ukulahleka kwezinwele ekhanda, ake sibheke izizathu eziyinhloko. Kunezinto eziningana eziyisisekelo:
Imikhiqizo yokunakekelwa engafanele;
Imiphumela emibi yezidakamizwa;
Ukuvezwa kumadivayisi aphezulu okushisa (isomisi sezinwele, i-ironing).
Ukugwema ukulahlekelwa izinwele, akudingeki nje kuphela ukukhipha izimbangela zalokho, kodwa futhi uzame ukugcina izinwele, noma ngabe inkinga ayiyona inhle kakhulu. Singakwazi ukushintsha kalula i-shampoo noma sishintshe ikhanda, kepha asikwazi ukuxazulula izinkinga zomoya ongcolile namanzi, ngakho kufanele sigcine izinwele nomzimba wonke unomsoco omuhle, amavithamini.
Izinto eziphilayo zendoda nomfazi zinezizinda ezihlukahlukene ze-hormonal, izidingo ezahlukene kanye namathuba, ngakho-ke kubalulekile ukulwa nokulahlekelwa izinwele zesilisa nabesifazane ngezindlela ezahlukene.
Ukuvimbela ukulahlekelwa izinwele zezinsikazi
Indlela yokuvimbela ukulahlekelwa kwezinwele kwabesifazane? Kubalulekile ukulalela amathiphu alandelayo:
Qala ukudla ngendlela efanele. Emenyu yakho kufanele ibe imikhiqizo yemvelo: inhlanzi, amaqanda, ushizi we-cottage, ubisi, ushizi, izithelo ezomisiwe, amantongomane nemifino. Zama ukungasebenzisi kabi amafutha amaningi, usawoti, izitsha zokubhema. Okufanayo kusebenza kotshwala, iziphuzo ze-carbonated, ikhofi.
Zama ukugwema ukulimaza izinwele zakho ngamathuluzi wokubhala. Izinwele zensimbi nezinsimbi zishisa izinwele, zenze zibe zinyama, zome futhi zingabi nampilo. Izinwele ezinomile nge-hairdryer kuphela ezimweni ezingavamile.
Uma udinga izinwele zezinwele, khetha izinsiza zemvelo ezifana ne-henna, i-basma. Uma usebenzisa upende, bese ukhetha ngaphandle kwe-ammonia. Izindlela ezinjalo zokugxeka zinikelwa abakhiqizi abaningi.
Ukusebenzisa izesekeli ezihlukahlukene, njengezinwele zezinwele, izinwele zezinwele, ungacindezeli ama-curls. Kusukela kokulungiswa okuqinile okuqhubekayo, izinwele zezinwele zingakwazi ukuvuvukala, ezingabangela ukubola.
Uma i-dandruff ibonakale esikhwameni, kuyadingeka ukuyiqeda. Lesi sifo, esiholela ekulahlekeni kwezinwele.
Sebenzisa amathuluzi alungile. Ngemva kokugeza izinwele zakho, sebenzisa njalo ama-air conditioners afana nohlobo lwakho. Amaski angathengwa ezitolo noma alungiselelwe ngokuzimela.
Ukuvimbela ukulandelana kwesimo samadoda
Indlela yokuvimbela ukulahlekelwa kwezinwele kumadoda? Lalela amathiphu alandelayo:
Thatha amavithamini akhethekile emadodeni. Zizilinganisa ngokunembile nezidingo zomzimba wesilisa.
Gqoka izicathulo ezincane zoboya. Uma isimo sezulu sivumela, kungcono ukufaka nje i-hood.
Sebenzisa ama-combs akhethekile.
Khetha izimonyo eziphezulu zezinwele zokunakekelwa kwezinwele.
Imikhiqizo yokuvimbela ukulahleka kwezinwele
Impilo yezinwele iyathinteka yizinto zokudla namavithamini esiwadlayo. Cabanga lapha imikhiqizo eyishumi, ewusizo ngezinwele.
Izinhlanzi nezilwane zasolwandle. Zine-phosphorus, i-zinc, i-iodine namafutha enempilo. Ngaphezu kwalokho, izinhlanzi zinamavithamini B 12 nezinsimbi, ezidingekayo ukuze zondle izinwele.
Amantongomane. Ukuqinisa izinwele ze-selenium kuqukethwe ku-nut yaseBrazil. I-Walnut icebile i-alpha-linolenic acid, ethuthukisa isimo sezinwele. Ukuntuleka kwe-zinc, okuholela ekulahlekeni kwezinwele, kuzosiza ukugcwalisa amantongomane, ama-pecans nama-alimondi.
Imifino eluhlaza. Izinwele zidinga izinto eziqukethe imifino eluhlaza kanye namacembe - amavithamini A no-C, i-calcium nensimbi.
Izinkukhu zezinkukhu. Inyama ye-turkey nenkukhu icebile kakhulu kuma-protini. Ibuye iqukethe insimbi.
Amaqanda. Amaqhawe amakhulu amaprotheni angabizwa ngokuthi amaqanda, akunandaba ukuthi yiyiphi indlela. Iqukethe i-biotin edingekayo.
I-Courgettes. Le mifino kufanele igcinwe ebumnyameni, ukuze ingabhubhisani i-vitamin C. Kubaluleke kakhulu ukuthi i-zucchini iqukethe i-potassium ne-silicon, ngenxa yokuthi izinwele ngeke zinqunywe.
Ukudla okuphelele. Esetshenziselwa ukupheka isinkwa noma ukupheka okusanhlamvu, okusanhlamvu konke kucebisa ukudla nge amaminerali namavithamini, ukuqinisa izinwele. Izinsiza eziwusizo kakhulu kuzoba amavithamini weqembu B ne-zinc, eziqukethwe okusanhlamvu.
Oysters. Kondla ngokuphelele futhi uqinise izinwele nama-oysters ngenxa yokuqukethwe okukhulu kwe-zinc kanye nesithako semfihlo - i-antioxidant enamandla.
Imikhiqizo yobisi. I-yogurt ayiyona nje ukudla okulula, kodwa futhi nomkhiqizo owusizo kakhulu wezinwele eziqinisayo. Ngenxa ye-whey, i-casein ne-calcium emikhiqizo yobisi, iqinisa izinwele ngokuqinile.
Izaqathe. Wonke umuntu uyazi ukuthi i-vitamin A, i-carotene, inokuningi okutholakala karoti. Ngaphezu kwemiphumela emihle ebusweni, kuthinta futhi isimo se-scalp. Futhi isikhumba sinempilo, izinwele zizozizwa zingcono.
Amavithamini wezinwele eziqinisayo
Ingabe unezinwele? Ungakuvimbela kanjani? Ukudla okuphelele, Yebo, okuvamile, kepha amavithamini kufanele abe khona ekudleni.
I-Vitamin A. Ukuvimbela ukulahlekelwa, kuthuthukise ukukhula, kuqinisa izimpande.
Amavithamini B azokwenza izinwele zikhanye futhi zisize ekukhuleni kwazo.
I-Vitamin C. Inikeza izinwele zezinwele ezinomsoco ngenxa yokuhamba kahle kwesikhumba.
I-Vitamin E. Ngezinwele zayo noma ukwephulwa kwayo kungase kuqale i-sechsja, ukuphulwa nokuphuma. Kubalulekile ukukhanya kwezinwele.
I-Vitamin PP. Kuzokwenza ngcono umsoco we-follicles, ukuqinisa, ukugqugquzela izinwele ukukhula.
Shampoos for ukunakekelwa
Ngaphezu kwemikhiqizo, kufanelekile ukuphatha ngokucophelela ukukhethwa kwezimonyo. Futhi okuyinhloko yi-shampoo, okuvimbela ukulahleka kwezinwele. Okokuqala, kufanele ihambisane nawe ngohlobo. Cabangela okuvame kakhulu.
Vichy Dercos. Ukuqinisa, ukulwa nezinwele. Umkhakha oqeqeshiwe nge-amineksilom - i-molecule ehlushwa ukulahleka. Uqinisa i-shaft yezinwele nezinwele zezinwele. Ivimbela ukuqiniswa kwe-collagen, okugcina i-curls iguquguquke futhi iyanwebeka.
"Alerana . " Ukulahlekelwa, ukukhuthaza ukukhula. Inkampani ethi "Vertex" inikeza uchungechunge lwemikhiqizo ukuvimbela izinwele zokulahleka. Kukhona imigqa yamadoda nabesifazane. Ungakhetha i-shampoo efanele, i-balm-conditioner, i-spray, i-tonic, i-mask noma i-vitamin-mineral complex. Ukwakhiwa kwezindlela kuhlukile, kuye ngokuthi yiluphi uhlobo lwezinwele umuthi okuhloswe ngawo: omile, ovamile, ohlangene noma okhululekile.
"Fit" . Uqinisa izinwele, kuvimbela ukulahleka. Leli fomula lidalwa odokotela nabamakhemikhali ukuze banakekele izinwele ezibuhlungu. Isisekelo se-shampoo yinkimbinkimbi yemvelo eyingqayizivele.
Kunezinye izimonyo ezisebenzayo zokuvimbela izinwele zokulahleka. Kubalulekile ukukhetha kahle lokho okulungile kuwe.
Imithetho yokusebenzisa ama-styling amadivayisi
Cishe bonke abesifazane basebenzisa isomisi sezinwele, iqhinga noma insimbi yokwenza izinwele nsuku zonke. Uma ungeke ukwazi ukukhipha lawa madivayisi kusukela empilweni yansuku zonke, okungenani unciphisa imiphumela yabo emibi, njengoba bevusa ukulahleka kwezinwele. Indlela yokuvimbela isenzakalo esinjalo esingathandeki? Landela imithetho ethile:
Idivayisi kufanele ibe nesilawuli sokushisa. Ngezinwele ezincane, izinga lokushisa kufanele libe ngaphansi.
Ibanga uma umiswa ngomswakama wezinwele awukho ngaphansi kuka-20 cm. Kungcono ukoma izinwele ngokugeleza okunamandla komoya ophelile.
Izinto ezivela kuwo amacwecwe aqoshiwe noma aqoshiwe nazo zibalulekile. I-Ceramics ibhekwa njengokuphepha.
Uma usebenzisa i-curling iron, ama-curls aphikisayo avela phakathi, hhayi kusukela kumalengiso.
Qiniseka ukuthi usebenzise ukuvikelwa okushisayo.
Ukuvimbela ukulahleka kwezinwele ekhaya
Ngaphezu kokunakekelwa nokunakekelwa okukhethiwe kahle, ungayinaki izindlela nezindlela eziqinisa izinwele. Phela, ubuhle bezingodokazi zabesifazane bekwaziswa ngaso sonke isikhathi, ngakho-ke ugogo wakhe wayazi ukuthi angayigcina kanjani inhle futhi inempilo. Ungavimbela kanjani ukulahleka kwezinwele ekhaya? Sebenzisa amakhambi omuntu alandelayo.
I-mask yamafutha. Esikhathini se-scalp rubs burdock noma i-castor yamafutha, i-polyethylene cap ihlanganiswa imizuzu engama-30, khona-ke imaski ihlanzwa ngamanzi afudumele futhi impofu eningi.
Iqanda le-egg. Faka izikhupha ezincane zamaqanda esikhwameni bese uphonsa kahle. Shiya imizuzu engama-30, bese ugeza nge-decoction ye-peppermint.
I-anyanisi mask. I-anyanisi ixubene ku-grater, ixubene no-1 tbsp. Spoon wamafutha omnqumo. Hlanganisa ingxube esikhumbeni, uhlambulule imizuzu engu-15, bese ubeka ikhanda bese ugoqa ikhanda ngethawula ngamaminithi angu-30. Mask ukugeza kahle.
Ingabe unezinwele? Ungakuvimbela kanjani? Lalela amathiphu alandelayo:
Geza izinwele zakho ngamanzi athambile, ngoba lokhu ungabilisa nge-soda encane. Ukushisa kwamanzi okugeza kufanele kube ngu-40-45 ° C. Musa ukuhlanza umuthi ngamanzi ku-vial.
Sebenzisa ama-masks nama-conditioners. Ama-balms nama-conditioners ngeke nje enze izinwele zibe zenzeke futhi zilula, kodwa nazo zibavikele.
Khetha ama-anti-static, avimbela ukubukeka kwamathiphu ahlukanisiwe. Ungazihlanganisi izinwele ezimanzi, zisengozini kakhulu.
Zonke amathuluzi nezindlela ezingenhla zizodwa, ngakho-ke funa indlela yakho ephumelelayo yokulwa nokulahlekelwa izinwele. Uma wazi ukuthi ukukhiya kwakho kudinga yini futhi ubahlinzekele, ngokuqinisekile bayoba yiqhosha lakho!
Inhliziyo isigqi ezimweni ezivamile futhi sokugembula
I babhekane nezinga elikhulu emnothweni - lokhu kwezomnotho ... Isikhunta